The Ring ရုပ်ရှင်ထဲက သရဲမကို ကိုယ့် TV ကနေ ထွက်လာအောင် AR နည်းပညာနဲ့ လုပ်ပြခဲ့တဲ့ Developer
23 Feb 2018 . 4:15 PM
The Ring ရုပ်ရှင်ဟာ Horror နဲ့ သရဲရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်နေကြသူတွေအတွက်ကတော့ ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မေ့နိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုပါ။ The Ring ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတုန်း တီဗ္ဓီထဲကနေ သရဲမထွက်လာတာဟာ အခြားသောရုပ်ရှင်တွေကနေ ခွဲထွက်စေခဲ့တဲ့ ဇတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ Developer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Abhishek Singh ကနေ Augmented Reality – AR နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ The Ring ရုပ်ရှင်ထဲက Samara သရဲမကို တကယ်အပြင်မှာ တီဗ္ဓီထဲကနေ ထွက်လာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Abhishek ရဲ့ AR နည်းပညာဟာ Samara သရဲမက တီဗ္ဓီမျက်နှာပြင်ကနေတင် အပြင်ကိုထွက်လာတာမဟုတ်ပဲ အခန်းထဲမှာပါ လျှောက်သွားနေပြီး ကိုယ့်နောက်ကို လိုက်လာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် တော်တော်လေးကို ပီပြင်ပြီး ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။
အခြား Developer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Mike Woods ကလည်း AR Kits ကိုပဲ အသုံးပြုပြီးတော့ The Ring ရုပ်ရှင်ကို AR နဲ့ ပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့ပေမယ့် Abhishek Singh ရဲ့ AR နည်းပညာကိုတော့ မှီခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။
ကဲ… ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ တီဗ္ဓီကနေရော The Ring ရုပ်ရှင်ထဲက သရဲမထွက်လာတာကို ကြုံချင်ကြသေးလား?
The Ring ရုပျရှငျဟာ Horror နဲ့ သရဲရုပျရှငျတှေ ကွညျ့နကွေသူတှအေတှကျကတော့ ဘယျတော့ပဲဖွဈဖွဈမနေို့ငျမှာ မဟုတျတဲ့ရုပျရှငျတဈခုပါ။ The Ring ရုပျရှငျထဲမှာ ရုပျရှငျကွညျ့နတေုနျး တီဗ်ဓီထဲကနေ သရဲမထှကျလာတာဟာ အခွားသောရုပျရှငျတှကေနေ ခှဲထှကျစခေဲ့တဲ့ ဇတျဝငျခနျးတဈခုဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာတော့ Developer တဈဦးဖွဈတဲ့ Abhishek Singh ကနေ Augmented Reality – AR နညျးပညာတှကေို အသုံးပွုပွီးတော့ The Ring ရုပျရှငျထဲက Samara သရဲမကို တကယျအပွငျမှာ တီဗ်ဓီထဲကနေ ထှကျလာအောငျပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
Abhishek ရဲ့ AR နညျးပညာဟာ Samara သရဲမက တီဗ်ဓီမကျြနှာပွငျကနတေငျ အပွငျကိုထှကျလာတာမဟုတျပဲ အခနျးထဲမှာပါ လြှောကျသှားနပွေီး ကိုယျ့နောကျကို လိုကျလာနတောပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ တျောတျောလေးကို ပီပွငျပွီး ကွောကျစရာကောငျးတယျလို့တောငျ ပွောလို့ရပါတယျ။
အခွား Developer တဈဦးဖွဈတဲ့ Mike Woods ကလညျး AR Kits ကိုပဲ အသုံးပွုပွီးတော့ The Ring ရုပျရှငျကို AR နဲ့ ပွနျလညျဖနျတီးခဲ့ပမေယျ့ Abhishek Singh ရဲ့ AR နညျးပညာကိုတော့ မှီခဲ့ခွငျးမရှိပါဘူး။
ကဲ… ကိုယျ့အိမျမှာရှိတဲ့ တီဗ်ဓီကနရေော The Ring ရုပျရှငျထဲက သရဲမထှကျလာတာကို ကွုံခငျြကွသေးလား?